यी ५ अभिनेत्रीहरु जसले : बलियुड मा रहिरहन आफ्नो अ*ङ्ग प्रदर्शनको साहारा लिए हेर्नुहोस ! – ताजा समाचार
यी ५ अभिनेत्रीहरु जसले : बलियुड मा रहिरहन आफ्नो अ*ङ्ग प्रदर्शनको साहारा लिए हेर्नुहोस !
यी ५ अभिनेत्रीहरु जसले : बलियुड मा रहिरहन आफ्नो अङ्ग प्रदर्शनको साहारा लिए भारतीय बलियुड उद्योग मा धेरै नै अभिनेता र अभिनेत्री हरु छन् जुन उत्कृष्ट अभिनय को कारण बलियुड मा टिकेका छन् र संसार भर तारिफ को पात्र बनेका छन् बिस्वमै सफल मानिएको बलियुड मा अभिनेता र अभिनेत्री हरुको कुनै कमि छैन सबै उत्तिकै प्रतिभासाली छन् तर केहि अबिनेत्री हरु अभिनय क्ष्मता भन्दा पनि उनीहरुले देखाउने बोल्ड फोटो र भिडियो हरुले मात्र बलियुड मा टिक्न सफल भएका छन् ! पर्दामा देखिने उनीहरुको बोल्ड सिनका कारण उनीहरुको फिलम् ले मार्केट तताएको हुन्छ !
यी ५ अभिनेत्रीहरु जसले : बलियुड मा रहिरहन आफ्नो अङ्ग प्रदर्शनको साहारा लिए
अमीषा पटेल: करियरको सुरुवातमा उनका फिल्महरु सफल भए । उनी पनि सफल अभिनेत्रीको रुपमा परिचित भइन् । तर विस्तारै फिल्म चल्न छोडेपछि उनले अंग प्रदर्शनको साहारा लिइन् तर उनलाई त्यो उपायले पनि साथ दिन सकेन